Kuze kube manje, abakhiqizi inganikeza ububanzi enkulu igesi kanye kagesi kuhhavini yakhiwe. Ukuze ukwazi ngalokho ukukhetha, udinga ukuqonda ububanzi.
Indlela ukufaka kuhhavini ngezandla zakhe
Kulabo ungathandi ukukhokhela amakhosi ukufakwa yabo futhi ufuna ukwakha kuhhavini, kudingeka siqale siqonde ukuthi zisetshenziselwe uxhumano ubuchwepheshe. Ekhishini yakhelwe niche kuhhavini kufanele ushiye igebe encane amamilimitha angu ezimbalwa phakathi kwezindonga nemishini. Kuyadingeka ukuba yakha wembozwe wumoya futhi isikhala ukupholisa. Ukuze uxhume kudivayisi, ngokuvumelana esidayisa ejwayelekile itholakala at ibanga 10 cm kusukela phansi, futhi ungekho okuphambene ohlangothini misa, njengoba ingase iphazamise kuhhavini isethi ukujula, futhi kubangele circuit kagesi. Kunoma ikuphi akunakwenzeka ukuba anqume wire, uma kungenziwanga alo isokhethi, ngenxa into encane uma kwehluleka iyawumphika isevisi yesiqinisekiso. Uma konke zincomo ukusebenza, ungaqala ukufaka uqobo:
Uma uxhuma ikhebula ukuze ikhava ngaphandle lisusiwe, kaningi kufanele zezikhali, bese uxhuma phezu ngentambo eside. Kuleso simo, uma i-plug is zezikhali, kungaba nje ekhishiwe futhi, usebenzisa lingasetshenziswa esigungwini, kukho bentambo ulahlekile. Kufanele libe 3-core ne-4 mm esigabeni.
Umshini ukukhwezwa ngokungenzi esingaphansi 16 Ampere ipulaki. Konke ukuxhumeka abazenzi nokusetshenziswa esiyisibopho phansi.
Ukuze yasibamba nezikulufi akhethiwe, iziphi screwed ku ohlangothini front, kungenzeka 4 izingcezu, futhi kumelwe kuhlelwe engxenyeni ekupheleni ohlangothini ezindongeni niches, okuyinto oyokwenziwa nesibekandzaba.
Uma bonke ababebuthene, kubalulekile ukuze uqondanise izikhala ukuze akwazi ukuhlala njengoba esakhelwe usayizi kuhhavini ayahlukahluka, naphezu kweqiniso lokuthi abakhiqizi ukwenza ngokuvamile yabo ejwayelekile. Ngaphezu kwalokho fixed ngezikulufo obandayo, futhi le nqubo kuphothulwe ngempumelelo.
Lapho kangcono ukusetha kuhhavini
Kuye lapho imishini yalolu hlobo, ihlukaniswe yaba lezi zinhlobo ezilandelayo:
ebucayi esakhelwe kuhovini hob abe nokulawula evamile wesifunda, ngakho esithandweni somlilo kufanele ukukhwezwa kuphela lihambisana;
Ohhavini ezimele kungenziwa agibele amahhashi ngalé kwalokhu okubonayo odongeni plasterboard, ngenhla egumbini eliphezulu, noma usule. Ukuze ukwazi ukubona lapho ukufaka kudivayisi, lalela wena ucabanga ukuthi iphi elula ukufika okuphambene, ngakho-ke sasingekho isidingo bend kakhulu, futhi akudingeki ukuba ugcine izandla zakho phezu isisindo.
Kungakhathaliseki indawo, abaluleke kakhulu kubhekwa ukulungiselelwa lesifanele, okungukuthi, ngaphandle ukuhlanekezela izinto, njengoba kungenjalo kuzodala vibration ezengeziwe ezithinta ikhwalithi ukupheka.
Izinhlobo Ohhavini okushunyekiwe
Uma yokufuna esishunyekiwe hob Ungakhetha inhlanganisela izitofu zikagesi kanye negesi ke ukwehluka kungekho kuhhavini. Uzinake mkhuba wamanje ukuthi namuhla igesi kuhhavini eyakhelwe uyawuthanda ezingadumile kakhulu ukwedlula kagesi. Isizathu esikhulu salokhu izici okukhulu nenduduzo wokusebenza inketho lokugcina. Kubalulekile ukwazi ukuthi igesi kuhhavini ngaphansi imvelo kuka kagesi, kodwa lona okugcinwe aye anda amandla ukusetshenziswa. Amandla kusukela kumadivayisi ezifana zokhahlamba kusuka 2 kuya ku-4 kW. Kulabo ukhetha fuel yakhe okwesibhakabhaka, qiniseka ukuba banakekele khona eliphezulu ezikhishwe. Nokho igesi kuhhavini eyakhelwe kuyoba inketho okuzuzisayo esisemqoka labo:
Umuzi ugesi enganamandla kakhulu, futhi ukusetshenziswa isixazululo okunjalo akunakwenzeka ukuphepha;
wahlala umkhuba igesi;
abantu isabelomali (phela lisebenze kagesi kuyabiza kokubili ukuthenga futhi operation).
Zindlela operation kuhovini
Kuye imodeli, hlobo nomkhiqizi kuhhavini kuchazwa iqoqo izindlela nokupheka imisebenzi. Izindleko imikhiqizo lithembela ngokuphelele amathuba it has ukunikela. Kohhavini elula eziphansi kanye engenhla Ukushisa hlupha. I izindlela ezivame kakhulu babonwa defrosting bafudumale ngesivinini esikhulu. amadivaysi Multifunction kungaba ukuziqhayisa kokuba 12 noma sitfo imibuso.
Ezikhathini zamuva kukhona ukulungiswa lwemivubukulo ngokuthi "umoya 3D ashisayo", okuyinto, ikakhulukazi elakhiwa ngo Hansa kuhhavini. Lesi sici ikuvumela ukubhaka emazingeni eziningana ngesikhathi esisodwa.
Ukuba khona ezihlukahlukene izindlela sokulungiselela kungaba ozibongayo multifunction Ohhavini. Siyabonga kubo, ningakhathazeki ngokuthi isikhathi sokupheka futhi lokushisa oyikhethayo. Ngaphezu uhlu ejwayelekile izici, izindlela ungahlinzekela ukuhlolwa lift, pasteurization, ukupheka-yogurt, njll abakhiqizi eziholela manje zihlanganisa zokukhiqiza umsebenzi kubhayela double noma microwave. Inhlanganisela hlupha nge ukulungiselela ngokushesha, kanye izinhlobo ezahlukene ukusetshenziswa umusi ukushisa futhi kuzosiza ukwenza isidlo nge uqweqwe crispy kanye nokugcina zonke amavithamini ewusizo futhi izakhiwo ewusizo ukudla.
Imisebenzi esemqoka nokuphepha
Labo uhlela ukuthenga nokwakha kuhhavini e ifenisha ekhishini, kubalulekile ukwazi ukuthi iyini le Imisebenzi esemqoka idivayisi kungase kube khona:
Sibona retractable. Iningi Sebawoti bayokujabulela kuze kube sekubeni khona inketho okunjalo, njengoba ungabona kuso futhi kuhlolwe indlela inkukhu ngomumo, ukususa ingozi ukubanjwa kwawo ngukushiswa. Kuze kube yimanje, kubalulekile kuphela ukuya phezulu kuze iloli ngokwayo, okuzoba kakhulu elula ezingaphezu kuka ukukhuphuka kokhula esithandweni somlilo.
Cold zethusi emnyango. Okwenza lokhu esithandweni izingxenye yokukhiqiza ubuchwepheshe elisetshenziswa izinto ezikhethekile, okwenza kube ufudumele ukupheka. Lokhu kukuvumela ukuba ulondoloze imali kagesi. Lesi sici olufanele kakhulu labo babe nezingane ezincane, njengoba asikho isidingo ngaphezulu sokukhathazeka ngokuthi baphephile.
Isikhathi. Kuyamangalisa ngempela emizi ukukhohlwa umatasa. Futhi, le ndlela iyasiza emkhosini iholide, uma udinga ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Ngokuba ukulungiswa udinga ukusetha isibali sikhathi ngesikhathi esithile, isibonelo, esakhelwe Ariston kuhhavini, ifakwe lo msebenzi ngokwayo okuyobe kusemqoka. Kwezinye onobuhle, kukhona alamu timer, ezwakala i-alamu, kanjalo ngokusazisa ukuthi sesifikile isikhathi ukuqala ukupheka.
Rotisserie. Le divayisi senzelwe ukupheka inkukhu noma izoso. It kungatholakala onobuhle eziningi, ngokwesibonelo, yona ifakwe eziko, "Bosch". Imishini esakhelwe ngaphakathi zithandwa kakhulu ngenxa yokuba khona Izithako enjalo.
Grill. Lolu uhlelo olufakwe kuyi ozikhethela elikuvumela ukupheka ukudla nge uqweqwe iqinile futhi okumnandi. Ngokuvamile kuhhavini, yena ifana Kuvunguza ukuthi unesikhathi esifushane. Ukudla okwenziwe ngale umbuso, tastier okuningi futhi elimnandi ngaphezulu.
Pipe uphenyo noma uphenyo lokushisa. Lena inaliti ephephile, okuyinto ehlangene isikhungo ukulawula kuhhavini. Nge umsebenzi onjalo njalo ungakwazi ukulawula izinga lokushisa lapho upheka inyama. Isibonisi kuhhavini zizobonakala kuwo wonke ulwazi ukupheka. Ukusebenzisa lolu hlelo, ungakwazi nokulungisa inyama ephelele noma reheat yona izinga lokushisa oyifunayo.
Avtopodzhig. Lokhu kusebenza efanele kuphela igesi Ohhavini. Ukusebenzisa ithuluzi ngokuzenzakalelayo futhi ngaphandle umentshisi nibase umlilo.
isihlungi Zhirosobirayuschy. idivayisi okunjalo ogibele kususwa udonga lwangemuva kuhhavini. Le divayisi wahlanganyela ukumuncwa ononile nawo wonke amaphunga, futhi kusiza ukuvikela fan kusuka ezingcolisa okungafunwa, okungaholela zokugwema ukuphuka.
Ukubika Inkinga YeWindows. Wonke umuntu wesifazane uyaphupha mayelana nokwenza namakhekhe wakhe babengabalandeli simnandi kakhulu futhi ngokulinganayo-kubhakwa. Umholi isingeniso kwezinhlelo ezinjalo yiyona brand Gorenje. kuhhavini esakhelwe ngaphakathi isebenzisa fan ngoba ngisho ukushisa ukusatshalaliswa phezu wawuqeda wonke lo mqulu ngokusebenzisa efanele air kwegazi.
Izinhlobo umnyango ukuvulwa
Iphuzu elibalulekile kulabo abafuna ukwakha kuhovini uhlobo umnyango ukuvulwa. Lapha, nakulokhu okulandelayo:
umnyango amaseviyethi. Lena ngenye yama-izinhlobo ezivamile, lapho ukusetshenziswa komzila telescopic kusiza kakhulu yokulayisha athula izitsha.
Swing. Kulokhu, umnyango kuzovula kwesobunxele futhi ilungelo by 180 degrees. Ngaphambi kokufaka, qiniseka ukunikeza yokuhlala kuhhavini ekhishini sakhiwo.
Sibona retractable. Lolu hlobo elikhona inombolo yohlobo yanoma abakhiqizi owaziwa. Naphezu nobukhulu balezi kuhhavini esakhelwe, zonke iziqobosho efakiwe ngqo emnyango uhambe nalo emva wokuvula. Ukususa ukudla okuphekiwe therefrom kalula kakhulu, futhi kube lula ukucubungula wokuhlanza esithandweni ngenxa ukufinyelela okulula ke. Kukhona ethile eyodwa kuphela: uma inqubo ukupheka ngokuvamile avule umnyango, ngokushesha walahlekelwa izinga lokushisa bafudumale.
Kangakanani ukulawula kuhhavini
Lapho Ukushisa igesi bungabonakala kuphela isilawuli mechanical, futhi uma kukhona ongakhetha kagesi ezifana yilezi: imenyu inzwa, isibonisi electronic kanye ne-electromechanical pivoting izibambo. Ngokusetshenziswa electronics yesimanje ngokunembile ukusetha lokushisa edingekayo Ukushisa imodi ekhethiwe, kanye kungenzeka ukubukela ukupheka. Ngokwesibonelo, bonke kuhhavini "Ariston". Eyakhelwe zikagesi nge isethi ngcono ongakhetha inikezwa ukusetshenziswa ukhululekile kubanikazi bayo. Ngisho izibambo turning kufihlwe ukubonisa, okungukuthi, ngemva zonke izindlela ezikhethiwe, kufihlwe ngaphakathi okwasetshenziswa. Ngokuvamile, le ngxenye linendima ebalulekile ekwakhiweni umklamo, njengoba ingelapheka nge Antique noma isitayela ezahlukene.
Kungani ngidinga acabangele amazinga?
Ukuze kahle futhi ngendlela efanele ukwakha kuhhavini, udinga bawubeke ekhosombeni ukuze ifenisha kwaphawuleka izikhala ezincane futhi ngesikhathi esifanayo, imisebenzi zedivayisi zitholakala kalula futhi wazilungisa kahle. Ubukhulu ngqo kwanoma yiphi impahla eshiwo kumadokhumenti ehambisana nomkhiqizo. Ngokuvamile abakhiqizi ukukhiqiza European standard somlilo, benza angabelwa futhi kuhhavini "Bosch". imishini esakhelwe ngaphakathi lokhu brand uye eside wathola isikhundla salo okuholela emakethe umthengi.
Cishe zonke igesi kanye kagesi Ohhavini zenzelwe ukusetshenziswa e niche cm 60, njengoba kuyinto evamile we ephansi ekhishini izithupha ukujula. Ububanzi lezi amadivaysi kungaba zahlukahlukene kakhulu, kuya ngevolumu oyifunayo ukuthi iyatholakala kuwo. Yiqiniso, zikhona nezinye izinketho. Ukuphakama amadivayisi athengwe futhi kungaba ezahlukene, kubalulekile ukucabangela lapho ukuklama ekhishini. Inzuzo enkulu ongakhetha standard elingenazinkinga esikhundleni kuhhavini endala nge entsha, zanamuhla. Awudingi ukuba afeze kabusha olukhulu ekhishini ifenisha.
Embodiments wokuhlanza kuhhavini
Kukhona izinhlobo ezine yokuhlanza kuhhavini: lula, pyrolysis, okhanda amanye amathuba, hydrolysis. Inketho ezivamile ubhekwa uhlobo lokuqala. Kulokhu, amaqabunga abushelelezi ngaphakathi kuhhavini, ngoba lokhu kulula ukuhlanza kusuka ezihlukahlukene izinto. Ukuze izindonga ezingemuva futhi ohlangothini ikakhulukazi esetshenziswa enamathela okhanda amanye amathuba. Ngokusetshenziswa a koqweqwe lwawo umsebenzisi ekhethekile kuba lula kakhulu ukuhlanza ukungcola, futhi kuwo ngaphansi kwethonya lokushisa, amanoni kuqala ukuhlukanisa ngokwakho. System yiyona pyrolysis eqolo, njengoba uma usebenzisa le modi, izinga lokushisa likhuphuka degrees 500 futhi inhlabathi zanqwabelana udoti ngokoqobo zishiswe. Omuny uhlala kuphela ukususa umlotha uvele ngemva kokuhlinzwa. Libuye ngokuvamile kakhulu esetshenziswa hydrolysis mode, ubonelela ukuhlanzwa amanzi umusi kanye esincane yokuwasha ekhethekile. Lolu ketshezi lelungiselelwe is batheleka pan, kulandelwa isimiso esikhethekile ifakiwe. Emva inqubo, ichopho ivulekile, isipanji ezinezimbobo wesula kuhhavini eyakhelwe. Izibuyekezo zokuhlanjululwa izinhlelo zahlukahlukene kakhulu. Kukhona womabili amazwana emihle nemibi. Ekugcineni, wonke umuntu ekhetha yena imodeli futhi yokuhlanza uhlelo olufanele kangcono kuye.
Akusiyo imfihlo ukuthi zonke ukunikeza induduzo ekhaya lakho, asebenzise izindlela ezihlukahlukene zanamuhla. Ukukhethwa akuyona, futhi ukusetshenziswa idivayisi ezifana eyakhelwe kuhhavini. ngezilinganiso ezifana ukukhiqizwa kungaba nhlobonhlobo kwibanga sasivumela ububanzi. Ngokwesibonelo, amadivaysi elula angathengwa ruble ayizigidi ezingu-20. Lwakamumva enezici izobiza umthengi in inani ruble 21 000. kuze ruble 50 000. Futhi uma ufuna ukuba wedwa futhi igugu, ke kuyodingeka bakhokhe kaningana. Abakhiqizi njalo ephuma nenkambiso ezintsha njengekhono ezibizayo futhi ezishibhile, futhi zihlanganisa izici ezintsha.
Intengo kuhovini bathembele ngokuphelele ezintweni nomkhakha we izinhlelo sifaka, kanye nobukhulu ukwelashwa uhlelo. Uma umpheki abanolwazi Yiqiniso, ufuna kanye nezidingo ayikwazi kungagcini isethi ejwayelekile. Ukuze umsebenzisi ovamile kuhhavini ofanelekile imisebenzi elula.
Kuze kube manje, inani elikhulu labantu uyisebenzisa zikagesi esakhelwe, hhayi ngaphandle, futhi Ohhavini. Njengoba kuveziwe ngabasebenzisi, amadivayisi njenge ukulingana kalula kunoma iyiphi i-ekhishini ngenxa uhla enkulu futhi ezihlukahlukene imiklamo.
Ukubhaka Lovers uqaphele ukuthi Ohhavini kagesi kukhona encomekayo ezingaphezu kuka gesi, ngenxa yokuba khona kuzo supply okuzenzakalelayo ukushisa kanye nomoya Ukubika Inkinga YeWindows, ekhuthaza izinga okusheshayo baking.
Naphezu kweqiniso lokuthi abesifazane abaningi ekhishini, amadoda kufanele lo esilindele kwesici njengoba amathe, ngoba noma nini ungakwazi ekhaya ukupheka inkukhu okumnandi futhi kebabs.
Labo besifazane abaye bazama izinketho eziningana for Ohhavini, bathi kungcono ukuthola idivayisi ukushisa ingilazi, ukuze kamuva ugweme ukusha kunokwenzeka.
Pobeditovye sokuprakthiza: izici futhi izicelo
Semi-ngwenya amaphampu: Ukubuyekeza, intengo, ukubuyekezwa
Air Decontaminating: izici lobuchwepheshe kanye isimiso ukusebenza
Simferopol-Sevastopol - indlela ukuze uthole ngokushesha?
Popular amagama zesifazane: igama indodakazi ezizalwayo?
Eseyintsha imfashini - a nano-aquarium